Iskufilan Oo Dhulka Ku Jiiday Kisima
Waxaa maalinimaddii Talaadadda ee ay taariikhdu ahayd Oktober 15, 2013 ay ciyaar Final ah ku dhex martay garoonkii weynaa ee aan Waamo Stadium ee aan darbiga lahayn labadda kooxood ee heerka kowaad ee ISKUFILAN ee ka dhisan xaafadda Fanole iyo kooxda kale ee KISIMA oo iyaduna ka dhisan xaafadda Calanley.
Ciyaartan ayaa waxay ahayd mid aad u xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid xaafaddaha magaaladda iyo waliba tuulooyinka u dhow dhow magaaladda Kismayu oo runtii aad looga xiiseeyo kubadda cagta oo la dhihi karo waa hooyaddii kubadda cagta Somaliya ee barisamaadkii haddana u muuqata inay dib ula soo noqonayso sumcaddii ay ku lahayd geyiga Somaliyeed.
Caruur iyo ciroolaba looma kala harin, waxaanad arkaysay taageerayaasha labadda kooxood oo kala sitay qoraalo ay ku taageerayaan kooxaha ay kala taageersan yihiin, sawaxanka iyo waxaa is qabsaday " Kani galbay ku kale mooyee ". Tarabuunku intuu buux dhaafay ayaa waxaa la hareereeyay garoonka oo dhan oo looma baahan caruurta soo qabata kubadda.
Waxba yaanan qoraal kugu daalinin akhristow e waxay ciyaartu ku soo gabagabowday 2 - 0 ay guushu ku raacday kooxda ISKUFILAN oo aan halkan mahad ugaga soo jeedinayno tababarayaasheeda, maamulka, ciyaartooyda iyo taageerayaasheeda. Waxaa sidoo kale dadaal badan muujiyey kooxda KISIMA oo iyadu tiri, " Waa inoo tartamadda dambe " qaadatayna koobka kaalinta labaad.
Waxaan sinaba lagu hilmaameyn guddiga isboortiska heer gobol, degmo, iyo garsoorayaashii soo daadihaynayey ciyaarahan iyo waliba Guddiga Qurba-joogta Sports G/J/Hoose iyo Dr. Abdisamed Abicar Hagi oo si joogta ah talo iyo dhaqaalaba ula garabtaagnaa ciyaarahan. Waxaa xusid gaar ah mudan Marwo Tufaax Sayid iyo reer Alberta Canada oo taageero dhaqaale ka gaystay qabashadda ciyaarihii Finalka.
Waxaan ku guubaabinaynaa kanacodsanaynaa maamuladda kala duwan ee ay khusayso arrimaha bulshadda heer kasta iyo ganacsataddu inay dhisaan GAROONKA WAAMO STADIUM oo runtii ah meel duntay oo baabuurta lagu barbarto inta aysan ciyaari ka soconin noqotayna wado loo maro xaafadaha cusub ee ku hareereysan labadda birood ee goolasha!
GUUL, HORUMAR, IYO NABAD.